Ogaden News Agency (ONA) – Labada caran (Dhoombe & Khadar) ciqaabta ku haboon waqtigeeda Raboow nagu sin, Aamiin- By: Xaaji M/rashiid.
Labada caran (Dhoombe & Khadar) ciqaabta ku haboon waqtigeeda Raboow nagu sin, Aamiin- By: Xaaji M/rashiid.
Posted by Daljir	/ November 16, 2017
Murti dhumucwayn ayaa tibaaxda in Malaku,mowdka loo jeediyay eedo farabadan taasoo sheegaysay inuu dad badan laayay, balse wuxuu kaga jawaabay anigu waxtar waan leeyahay, waxaana kamid ah waxtarkeyga inaan nin daciif ah oo guursan kari waayay xaas u sameeyo! walaalkii baan dilayaa kadib haweentiisa ayuu dumaalayaa. Sida saxda ah Malagu cidna lama galin doodan, laakiin soomaalida ayaa xikmad uga jeedda!
Intaana sii dhexgalin dhuuxa qoraalka aan soo dulmaro waxa kala qabsaday shacabka somalida ogadenya iyo nacabyada ku dul dhaylaasaya. Sida la ogyahay bulshadaasi waa umad qiimo badan oon marna ogolaanin bahdilka. Waa bulsho caqiido wanaagsan oo ku kalsoon rabigeed. Waa bulsho aan marna madaxa hoos ugu dhigin Majuusi, Mililikh iyo Mangisti toona. Waa bulsho geesi ah oo kasoo jeedda Odayaal raad halgameed wayn kaga tagay Geeska Afrika. Waa bulsho cadowga iyo daba,dhoonadiisa isku waddo marisa. Waa bulsho diiday inuu guumaystuhu ku dalxiiso wadankeeda. Waa bulsho adkaysigeeda markuu cadowgu kayaabay uu madax gacmaha saaray! Waa bulsho jawaasiista guumaystaha kabo,qaadyada uu ah aad u neceb. Waa bulsho Geeska Afrika caan ku ah nafhurnimada iyo iska caabinta cadowga.
Haday xaqiiqadu sidaa tahay waa maxay dacatiyada dadwaynaha kasoo gaadhay hardanka ay kula jiraan Woyaanaha? waxaa jirta qawaaniin caalamku ku heshiiyay oo uyaala goobaha dagaalka, kaasoo si cad u qeexaya xuquuqda dadka tabarta yar ee aan dagaalka kujirin sida Caruurta, Dumarka iyo Waayeealda. Qodobkaasi wuxuu qabtaa dawlad iyo ciidamadeeda dagaalka kujira, balse nasiib darro maamulka Atoobiya kajiraayi waa gaas dhagoole oo majiro wax waraaqo ku qoran oy tixgaliyaan!
Dalka iyo Dadka Ogadenya waxaa lasoo darsay dhibaato aan baaxadeeda bani,aadam qiyaasi karin. Saxaafadu waxay inta badan ka hadashaa dhibka dadka loo gaystay, laakiin waxaan xusayaa in dalka lagu sameeyay nabaad guurin, kadib markii dhirtii la gumaaday iyadoo loogu marmarsanayo waxbaanu beeri, waxabaanu shidaal baadhi iyo meeshan ciidan baa degi!
Xagga dacatiyada dadwaynaha soo gaadhay waa adigu tiriyoo hadaalin! qaarbaa loo sameeyay xabaal wadareedyo! qaarbaa la gawracay! qaarbaa dhaawac dartii dhiiggu kahoorayaa! qaarbaa Geedaha ka laalaada! qaarbaa xusaska lagu tuuray! qaarbaa la caydheeyay! qaarbaa la qixiyay, qaarbaa jeelasha laga buuxiyay, qaarbaa la cabsi galiyay! qaarbaa qasab lagu ciidameeyay! qaarbaa la tacliin seejiyay, qaarbaa la guur seejiay! meesha qaar kalana la faroxumeeyay!
Hadaan usoo laabto xaga labada dayuus een magacyadooda ciwaanka ka dhigtay waxaan filayaa inaad saxaafada xorta ah kala socoteen safarkooda ay Denmark ku tageen oo ahaa sida la ii sheegay inuu dhintay wiil ay qaraabo ahaayeen Dhoombe. Taas micnaheedu waxaa weeye inay aaska iyo tacsida kasoo qeyb galeen iyagoo iska dhigaya kuwo naxariisi ku dambayso. Waxay taariikhda ka galeen baal madow markay sida waxshinimda ah ula dhaqmeen maydkii- marxuum halgame Sheekh Deeq. Sheekhu wuxuu la dagaalamayay soo duulayaasha uu Tigreegu horboodayo waana la ogaa inuu dagaal ka dhaxeeyo. Iyagu waa laba carane ma iyagaa dilay halgamaha, maxaase lagu fasiri karaa inay galaan dakanaha gaadhsiiyay heer ay kabaha la dulmaraan maydka marxuumka. Waxaa intaa kasii daran inay boodhwayn ku muujiyeen bahdilka maydka marxuumka kuna noqon,doonto makhraati buuxo!
Halgamayaal wadanka Ogadenya dadkiisii noolaa waa la bahdilay kuwii dhintayna aakhiraa looga dabatagay, sidaa daraadeed waxaan si kal iyo laab ah uga codsanayaa waaxda Garsoorka iyo Cadaaladda ee halganka inay si wayn isha ugu hayaan labada Caran oo kala ah Dhoombe iyo Khadar si maalin maalmaha kamid ah loo mariyo waxay mudanyihiin ee ciqaab ah! Ilaahay Cazza Wajalla waxaan ka baryi inuu inagu wada simo waqtigaas, Aamiin.
Labada Caran een doonayo inaan meel saaro, waxaa is waydiin leh maxaa sababay inay dadka soo hor istaagaan? maxaa sababay inay madaxnimo iyo maamul sheegtaan? jawawaabtu waxaa weeye Raggi mansabka iska lahaa waa qaar gumaystaha gacantiisa ku baxay iyo qaar hayjadda kujira oo halgamaya, taasaana ugu wacan inay xafiisyada umadda dhex taxaashaan!
Dardaaran- waxaan umadda Soomaalida Ogadenya leeyahay Halgamayaal waxaad ka adkaateen siyaasaddii guumaystaha iyo ciidankoodii, waxaadna ku kiciseen qowmiyadihii kale, sidaa daraadeed waxaa haboon in wada tashiga iyo wax qabadka la xoojiyo.
Ugu dambayn Dambiilayaasha kasoo soka maray cadowgii soo jireenka ahaa ha ogaadeen in guusha halganku kaabiga saaran tahay, walina ay jirto fursadii ay umadooda cafis ku waydiisan lahaayeen!.